Advertisement with MoeMaKa | MoeMaKa Burmese News & Media
>May Kha - Article
SK ရှန်လိန်း - ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ အရှိုချင်းရွာ ချင်းစာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပ
Saw Ngo - Save the money from Burma
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● ကျ​နော်​သိ​သောနှင်းဆီ ...
>4th Day in front of Insein Prison - DASSK Trial
>At Mar Mar Aye Foundation Fund Raising Event, Special Song CD to launched
ကာတွန်း မောင်ရစ် - ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ - wide of the mark
K ငြိမ်းချမ်း ● သူတို့ပြောတဲ့ ဒဂုန်တာရာ၊ သူတို့ပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး - အပိုင်း (၁)
Advertisement with MoeMaKa
မိုးမခကြော်ငြာလမ်းညွှန်မှာ အခမဲ့ ကြော်ငြာထည့်သွင်း လိုပါလျင်
မိုးမခမှာ မိမိသိစေလိုသော လုပ်ငန်း၊ နေရာ၊ ဆိုင်၊ အကြောင်းအရာကို ကြော်ငြာ မျှဝေလိုပါလျင်
အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး မိုးမခထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Address (လိပ်စာ၊ မြို့၊ နိုင်ငံ အပြည့်အစုံ)(required)
Name of Business / Place (လုပ်ငန်းနဲ့ နေရာ အမည်)(required)
Type of Business/ Place (လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ နေရာ၏ ကဏ္ဍ)
Website (၀က်ဆိုက် ဖေ့စ်ဘွတ် ရှိက)
မိုးမခ၏ ၀က်ဆိုက်၊ ဘလောက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာများပေါ်တွင်
တနေ့တာ သို့မဟုတ် နေ့စဉ် မျက်နှာစာတွင် ပေါ်လွင်နေမည့် အခပေး ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းလိုပါက ပြည်တွင်း မြန်မာလုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးမှာ
MoeMaKa Online Article Format Ad
Duration Service Rate (in Kyats)
1 Day (24 hours) Article Format Ad and Side Banner Ad Post at our main MoeMaKa website and MoeMaKa Blog ;
Pinned Posts at our main MoeMaKa Media Facebook page and secondary Friends of MoeMaKa Facebook page.
Plus Free of Charge
Print Magazine Insert for the brand / logo or company name. (NB : not the whole article) 120,000
MoeMaKa Online Side Banner Ad
1 Day (24 hours) Side Banner Ad Post at our main MoeMaKa website and MoeMaKa Blog.
Pinned Posts at our main MoeMaKa Media page and secondary Friends of MoeMaKa page.
FOC : Print Magazine Insert 60,000
Ad Insert in MoeMaKa Monthly Print Magazine
Type Rate (in Kyats) Remark
2 inches square Column (B&W) 20,000 *FOC online ad, randomly running inside articles
Half Page (B&W) 30,000 *FOC online ad, randomly running inside articles
Full Page (B&W) 60,000 *FOC online side banner ad for 1 day plus randomly running inside articles
2 inches square Column (Colour) 60,000 *FOC online side banner ad for 1 day plus randomly running inside articles
Half Page (Colour) 80,000 *FOC online side banner ad for 1 day plus randomly running inside articles
Full Page (Colour) 120,000 *FOC online side banner ad for2day plus randomly running inside articles
Back Coer (Colour) 150,000 *FOC online side banner ad for3day plus randomly running inside articles